I-Pine Bluff IFama yeHaus
Ifama sinombuki zindwendwe onguElaine
Phumla kunye nosapho lonke kule ndawo yoxolo yokuhlala eColbert. Kwiihektare ezingama-40 zePonderosa Pines, imizuzu nje engama-25 kumantla edolophu yaseSpokane, kunye nemizuzu eli-10 ukusuka kumabhoma amahle, iifama, kunye neendawo zomtshato eGreenbluff. Ixesha lasebusika libonelela ngokusondeleyo kwindawo yemidlalo yokutyibilika ekhephini kunye nekhephu. Sinabanye abahlobo abahle abanemilenze emine abathanda ukufumana izinto eziphathwayo kunye nokumbamba!
Nokuba uya kumsitho kwindawo yendawo, ukwenza impelaveki yemidlalo yasebusika okanye undwendwela i-Inland Empire entle, iPine Bluff Farm Haus iya kubonelela ngokukhululeka & indawo yokuhlala yasekhaya. Kukho amanqanaba ama-2 eendawo zokuhlala zeendwendwe, ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo kumgangatho ophambili, indawo yokulala yesofa ukumkanikazi kunye neebhedi ezingamawele ezi-2+ kumgangatho osezantsi ongaphantsi.
IPine Bluff Farm Haus ibekwe eColbert, kwimpuma ye-Hwy 2, kwaye “ihlala elizweni” iziva, kodwa kumgama nje wemizuzu embalwa ukusuka kwiivenkile zegrosari kunye neeresityu. IYunivesithi yaseWhitworth ingaphantsi kwemizuzu eyi-15, iMt. Spokane Ski & Snow Park ikumgama nje wemizuzu engama-20, kwaye iGreenbluff ilapha kanye phezulu endulini. IGreenbluff entwasahlobo nasehlotyeni ibonelela ngeemveliso ezintsha kunye neentyatyambo ezivela kwiifama zabucala, iindawo zokuthengisa utywala, iindawo zokuthengisa iwayini kunye neendawo zomtshato. I-Harvest Fest, ukusuka phakathi kukaSeptemba ukuya ku-Okthobha, ibonelela ngemisebenzi eyonwabisayo kuyo yonke iminyaka, iipetshi zamathanga, iimaze zombona, kunye nezona donuts zasekhaya ezenziwe ngethanga kunye ne-Apple cider entsha ecinezelwe.
IPine Bluff Farm Haus ikule ndawo sihlala kuyo kwaye singathanda ukukwamkela xa ufika. Ukuba unokufuna ukuqhagamshelana nathi ngaso nasiphi na isizathu emva koko nceda usithumelele isicatshulwa ngayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo onokuthi ube nazo.
IPine Bluff Farm Haus ikule ndawo sihlala kuyo kwaye singathanda ukukwamkela xa ufika. Ukuba unokufuna ukuqhagamshelana nathi ngaso nasiphi na isizathu emva koko nceda usithumelele…